Lola Llatas. Udliwano-ndlebe nombhali weencwadi ezifihlakeleyo zikaSara | Uncwadi lwangoku
Lola Llatas. Udliwano-ndlebe nombhali wencwadi ethi Iimfihlakalo zikaSara
UMariola Diaz-Cano Arevalo | 16/04/2022 11:54 | Udliwano-ndlebe, Ababhali, Iincwadi zoLutsha
Ukufota: Lola Llatas, iprofayili ye-Twitter.
lola llatas UnguValencian kwaye ubhala iincwadi zabantwana, ulutsha kunye nabantu abadala. Wafunda Ubunjineli boLuntu, obamvumela ukuba asebenze kwaye aphile kumazwe afana neIndiya okanye iOstreliya. Loo nto yamkhokelela ekubeni azinikele kuncwadi. Ungumbhali wolu thotho Iimfihlakalo ze sara kananjalo Iklabhu yabazalwana abancinci. Enkosi kakhulu ixesha lakho kunye nobubele yi udliwano ndlebe apho asixelela ngazo zonke kunye nezinye izihloko ezininzi.
Lola Llatas- Udliwano-ndlebe
UNCWADI LWANGOKU: Ungumbhali we Iimfihlakalo zikaSarah y IQela laBantakwethu abancinci. Zivela phi iingcamango zokuzidala?
lola llatas: Bendisoloko ndingomnye Ukuthanda uncwadi lwabantwana. Andizange ndiyeke ukuyifunda yaye, ekubeni ngoku ndinabantwana ababini abancinane, ndizibona ndibonakala ngokufumanisa kwabo ihlabathi. Ndiyakuthanda ukukhumbula inkohliso yezinto zokuqala.
sara ivela kuloo nto inxalenye enomdla loo nto ayigwebi kwaye iphonononga ngelixa IQela laBantakwethu abancinci ibonisa zonke amava nomzalwana wethus, azitshintshi nangona izizukulwana.
LL: Enye yeencwadi zokuqala endizifunde ngokuzimeleyo Momo, de UMichael Ende, ndaza ndamthanda uMomo nendlela awayethandabuza ngayo inkqubo yokuthenga nokuthengisa ixesha eyenza abantu abakhulileyo babe lusizi. Kulapho ndabona khona indlela ihlabathi eliya kuphucula ngayo ukuba besinokubona ngeso lobuntwana.
La Ibali lokuqala endiyibhalileyo isekwidrowa yam, kwaye imalunga ne-a umntwana ixhomekeke kubani hlangula el umhlaba yabadala. Ndinebhongo kakhulu ngayo kwaye ndiyathemba ukuba ngenye imini iyakubona ukukhanya kwemini.
LL: Ndifunde ukubhala ngokufunda, kwaye baninzi ababhali abandimakishayo kule minyaka idlulileyo. Ukususela kwiprozi ye UEmilia Pardo Bazán kunye noGustavo Adolfo Yiba o Beka, kwanendlela yokubalisa uStephen King.
Ndiyathanda ukufikeleleka kwe Isabel Allende, UCarlos Ruiz Zafon o U-Elvira mhle.
Ndiqhubeka ndifunda, ndiguquka kwaye ndongeza ababhali kolu luhlu lude lwababhali.
LL: Me encanta UManolito Gafotas. Usityhilela ububhanxa behlabathi lethu ngamehlo akhe. Ikwenza uhleke kwaye ucinge ngokulinganayo.
LL: Ndiye ndaziqhelanisa neemeko ndaza ndafunda nokubhala Xa ndinako. Kunzima ukufumana ixesha, kodwa akunakwenzeka. Ngelixa abantwana belele okanye ngamaxesha athile. Naliphi na ixesha lifanelekile ukwenza umboniso.
Mania? Andifuni tu. Ewe ngokunjalo, Andizange ndiyishiye incwadi ingagqitywanganokuba kuxa efunda okanye ebhala.
LL: Ukuba bendikwazi ukukhetha, bendiya kukhetha ukubhala kusasa, indlu ingabi namntu. Ndiyathanda ukuchwetheza ndijonge kwi iwindow. Ngezo zihlandlo, iiyure ziyahamba yaye andiyeki nokutya.
LL: Andikafumani naluphi na uhlobo endingenamdla ngalo. Bonke bafumanisa uluntu esiphila kulo kwiimbono ezahlukeneyo kwaye bandinceda ndiqonde ihlabathi.
Iyanditsala jonga imida, kwaye yiyo loo nto ndifunda kwaye ndibhala uloyiko. Nakwiincwadi zabantwana, njengaku Iimfihlakalo zikaSarah, imiselwe ukuquka izinto ezingaphezu kwendalo oko kusenza sithandabuze ubunyani.
LL: Ndiyafunda ngoku Frances Hardinger. Ndiyazithanda iinoveli zakhe ze-YA kunye nendlela ayibamba ngayo ingxabano kunye nemfihlakalo. Iyakwazi ukundigcina ndilindile ngalo lonke ixesha. Ndim ukubhala inoveli yabantwana okubandakanya abafike, kwaye ndonwabile.
LL: Kubonakala ngathi siphumile kubhubhane ngokufunda kancinci kwaye ndiyathemba ukuba iyaqhubeka. Ubume bopapasho bu ukuvuka kwakhona emva kokuvalelwa okuninzi kunye nokukhohlisa kuphefumlelwa kwii-fairs kunye neentlanganiso zokuqala.
Into eyandikhuthazayo ukuba ndipapashe kukuthanda kwam ukubhala. Kwakufuneka ndiziqeqeshe ukuze ndiqhubeke nokubhala, kwaye kufuneka ndiyivume loo nto Kuhambe kakuhle kakhulu kum.
LL: Ukubhala yindlela yam yokucamngca, kwaye isebenza njengendlela yam yokusaba xa izinto zingahambi kakuhle. Indinceda ndiphonononge iinkalo ezahlukeneyo zamava ngamnye kwaye ndifumane indawo yokuqalisa ukuqhubeka.
Iingxaki zihlala zizisa utshintsho, kwaye ukuze thina njengoluntu senze izigqibo ezifanelekileyo, sifuna abafundi abaninzi ukucinga ngokugxekayo, ke, ukuqhubeka ufunda iincwadi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Udliwano-ndlebe » Lola Llatas. Udliwano-ndlebe nombhali wencwadi ethi Iimfihlakalo zikaSara
Inoveli yokwenyani: yintoni na kunye neempawu